Iindaba -Uvavanyo oluphathekayo lwekhonkrithi show show
Namhlanje sivavanye ikhonkrithi kuvavanyo lokuboniswa bukhoma, ubukhulu becala siqhathanisa ukuqaqamba kwe-3, ishumi elinambini icandelo lokucoca iphedi kunye ne-3-torx pad polishing.
Eli licandelo le-3 ukuya kwele-12 lokucoca iphedi, ubukhulu be-12mm, ilungele ikhonkrithi eyomileyo kunye nomgangatho we-terrazzo. Iigrits ezingama-50 # ~ 3000 # ziyafumaneka. Iya kuba ndlongondlongo ngakumbi, yomelele, ibengezelele ngakumbi kuninzi lweintlaka ipolishi ipeyinti kwintengiso.
Le yenye iphedi esiyibiza ngokuba yi-3 intshi ye-torx polishing pad, neyasungulwa kunyaka ophelileyo. Isetyenziselwa ikhonkrithi eyomileyo kunye nomgangatho we-terrazzo, kodwa ubukhulu be-10mm kuphela. Yenziwe kwifomula yamva nje. ixabiso lihle kakhulu. Yindleko ephezulu kunale.
I-50 # -100 # -200 # yayo inoburharha kwaye yomelele kunesiko iphedi yentlaka, Ungayiphatha njenge Iipads ezingumxube, ezinokususa ngokukhawuleza ukukrala okushiywe ziidayimani zesinyithi ezingama-120 #, nkqu nama-80 #.
400 # -800 # -1500 # -3000 # ziyakhazimla iphedi ipolishi, ezinokwenza ukukhanya okuphezulu okumangalisayo kunye nokucaca okuphezulu kumgangatho wakho.
Eli candelo lovavanyo, ngumgangatho welitye lokusila. Kuye kwasila izixhobo zesinyithi grit 30-60-120 #, pads resin 50 # -100 #. Ukuze ufumane isiphumo uvavanyo elungileyo, sele sele ukutshiza hardener phezu komhlaba ukomeleza yobulukhuni emgangathweni. Ngoku umhlaba wohlulwe kubini. Ekhohlo Icandelo A nasekunene liCandelo B. Siza kuvavanya i-intshi ezi-3 zamacandelo alishumi elinambini ipolishi pad kwicandelo A, 3 intshi iporingi ipolishi yokubhala iya kuvavanywa kwicandelo B.
Emva kokucoca ngo-200 # -400 # -800 #, ungabona ngokuchanekileyo kumphezulu ukuba icandelo B line-sheen ephezulu kakhulu, kwaye uyakubona ukukhanya okuhle. Kumgama wama-30 ukuya kuma-50 eenyawo, umgangatho ubonakalisa ngokucacileyo icala kunye nokukhanya kwentloko.